Ny rehetra momba ny Print & Play, Print and Play - Ikkaro
Fizarana natokana ho an'ny Print & Play. Samy hampahafantatra ny lalao sy ny teknikan'ny fananganana lalao DIY.
Manonta sy milalao, manonta ary milalao. Izy io dia karazana lalao "tsotra" izay tsy afaka milalao mpanonta afa-tsy amin'ny fanaovana pirinty, satria natao pirinty sy nilalao an-taratasy izy ireo.
Fidirana haingana be, fa mety misy lalàna sy mekanika sarotra. Tsy tokony hafangaro amin'ny fahatsoran'ny fanamboarana azy ianao.
Modality miaraka amin'ny orinasany manokana izay mety tsy dia fantatra loatra, fa raha manome azy fotoana ianao dia azo antoka fa hanome fotoana be sy fotoana mahafinaritra anao izany.
Print & Play, famoronana kilalao ary kolontsaina DIY
Herinandro vitsivitsy lasa izay tao amin'ny twitter dia naneho hevitra aho fa hitan'izy ireo aho ny kanton'ny Print & Play, ary nanomboka tamin'izay aho dia nanao fikarohana mba hahitana hoe inona no atolotr'ity tontolo ity ary raha mahaliana ny manampy an'io Fizarana lalao
Ny pirinty sy ny lalao nolalovako tamin'ny famoronana kilalao birao amin'ny ankapobeny ary raiki-pitia aho, tsy azoko an-tsaina izany amin'ny lalao an-tsambo dia misy izao rehetra izao natokana ho an'ny DIY.
Ny tena nahagaga ahy dia ny fanontaniana sy fisalasalana maro ananan'ny olona rehefa mamorona sombin-javatra aho afaka mamaha sy / na manoro hevitra. Mamorona sombin-javatra mora vidy, miasa fitaovana isan-karazany sns. Efa ela aho no namaky sy nanoratra an'izany rehetra izany, mila mampihatra azy fotsiny ianao amin'ny famoronana lalao birao.